Madaxweynaha Hirshabelle oo maanta la kulmay wakiilka Midowga Afrika Madeira(Sawiro) | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Madaxweynaha Hirshabelle oo maanta la kulmay wakiilka Midowga Afrika Madeira(Sawiro)
Madaxweynaha Hirshabelle oo maanta la kulmay wakiilka Midowga Afrika Madeira(Sawiro)
Wakiilka Midowga Afrika ee dalka Soomaaliya Francisco Madeira ayaa maanta booqasho ku tegey magaalada Jowhar ee xarunta maamul goboleedka Hirshabeelle.
Wafdiga uu hogaaminayay Wakiilka Midowga Afrika Madeira ayaa waxaa xafiiskiisa ay ku booqdeen Madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Cosoble waxana ay ka wadahadleen arrimo ay ka mid ahaayeen ammaanka,horumarinta iyo arrimaha doorashooyinka.
Madaxa AMISOM oo ka hadlay kulankan ayaa sheegay in uu soo gaarsiiyay qoraal uu ka siday madaxda AMISOM kaasoo loogu hambalyeynayo qaabka ay u socdaan doorashada.
“Waxaan soo dhoweyneynaa qaabka ay u socoto doorashada Aqalka Hoose gaar ahaan in 11 kursi oo ay lahaayeen dumarka 9 kamid ah la buuxiyay,waxaan ka rajeyneynaa in doorashada ay ku soo dhamaato wanaag.”ayuu yiri Madeira.
Sidoo kale waxa uu sheegay in AMISOM ay diyaar u tahay in dowlad goboleedka Hirshabeele aan ka taageerno sidii loo horumarin lahaa ammaanka iyo weliba sidii dayactir loogu sameyn lahaa kaabayaasha dhaqaale sida wadooyinka si ay beeralayda si sahlan ugu geysan lahayd suuqyada wax soo saarkooda.
Agaasimaha guud ee madaxtooyada Maamulka Hirshabeelle C/dir Cabdulle Xooshow oo saxaafada la hadlay ayaa waxaa uu sheegay in ay AMISOM ay bilaabi doonto dhismaha qaar ka mid ah wadooyinka Hirshabelle iyo weliba horumarinta beeraha.
“Waxa ay AMISOM ballanqaaday in ay gacan ka geysanayso dayactirka 87 km oo kamid ah wadooyinka Hirshabeelle isla markaana gacan weyn ka geysato sidii looga saari lahaa Alshababa deegaanada ay weli maamulaan ee Hirshabeele”ayuu yiri Ambassador Xooshow.